EVY's Kitchen: ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ Blueberries Cheese Cake
ဒါအိမ်မှာလုပ်တဲ့ ပထမဦးဆုံး Cheese Cake။ ပထမတစ်ခါတုန်းက သင်တန်းမှာလုပ်တာ။ အဲဒီကတည်းက မလုပ်ဖြစ်တော့တာ ခုထိပါပဲ။ အားလုံး ၀လာကြတာနဲ့ Cheese Cake လုပ်မယ့် အစီအစဉ်ကို လက်လျော့ထားတာကြာပါပြီ။ ဖြစ်ချင်တော့ တနေ့ရုံးမှာ Colleague က Cheese Cake မှာပါတယ်။ (ဟိုတစ်ခါသင်တန်းက Cheese Cake ကို ရုံးယူသွားပြီး ကျွေးဖူးတာကိုး) ။ မှာလည်းမှာရော သူ့ကိုအားနာနာနဲ့ပဲ ငြင်းလိုက်ရပါတယ် ငါအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး၊ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ပြောမယ် ဆိုပြီးလေ။ ကိုယ့်လက်ရာကို ကိုယ်စိတ်မချသေးတာပါ။ အိမ်မှာမှ မစမ်းဖူးသေးပဲကိုး။ အိမ်မှာလုပ်ပြီး ပေးလိုက်လို့ မကောင်းမှ တကယ်ကွဲမှာ။
ဒါနဲ့ပဲ စမ်းကြည့်တဲ့အနေနဲ့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Texture ကတော့ ပထမတစ်ခေါက်ထက်ပိုပြီး Heavy ဖြစ်ပါတယ်။ စားလို့တော့ အရမ်းကောင်း။ အတော်လည်း ၀မှာတော့ သေချာသလောက်ပါဘဲ။ဒီတစ်ခါတော့ ပုံလေးတွေက အရမ်းကောင်းနေပါတယ်။ အိမ်ကလူ လက်စွမ်းပြထားတာပါ။ ခါတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပဲ ရိုက်တာ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ သူ Food photography ကို စမ်းချင်တဲ့ အချိန်နဲ့ ကြုံသွားတော့ ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ ရလိုက်တာပါ။ မုန့်လုပ်ချင်တဲ့လူနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့ လူနဲ့ တော့ဟုတ်နေတာပါပဲ။
Digestive Biscuit 175g ကိုချေပြီး ထောပတ် 60g (အရည်ပျော်ထား)နဲ့ ရောမွှေပါ။ ပြီးရင် removable base ပါတဲ့ tin ထဲမှာဖိသိပ်ပြီးထည့်ပေးပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ နာရီဝက်လောက် အအေးခံပေးထားပါ
90g sour cream3 eggs
90g sugar1 table spoon of lemon juice
75g non dairy whipping cream -whipped
75g white chocolate melted
ပထမဆုံး သကြားနဲ့ cream cheese ကိုစက်နဲ့ မွှေပါ။ ပြီးရင် melted white chocolate ကိုထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါ။ ကြက်ဥကို တစ်လုံးချင်းစီ ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ sour cream နဲ့ lemon juice/zest ကိုလည်းထည့်မွှေပါ။ နောက်ဆုံးမှာ whip cream ကိုထည့်ပြီးမွှေပါ။
Cream အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ရေခဲသေတ္တထဲက ပြင်ထားတဲ့ဗန်းကိုထုတ်။ base ပေါ်မှာ blueberry သီးခင်း။ ပြီး မှ cream တွေကိုထည့်ပါ။
ရေထည့်ထားတဲ့ဇလုံတစ်ခုမှာ ခုနက မုန့်ဗန်းကို တင်။ မတင်ခင်မှာ aluminum foil နဲ့အောက်ခြေကိုလုံ အောင်ပတ်ပေးပါ (ရေ၀င်မှာစိုးလို့)။ ပြီးရင် ၁၆၀ ဒီဂရီစီ oven မှာ ၇၀မိနစ်ကြာအောင်ဖုတ်ရင်ရပါပြီ။ မုန့်ဖုတ်ပြီးသွားရင် မုန့်ကို oven ထဲမှာပဲ အအေးခံပါ။ လုံးဝအေးသွားမှ ရေခဲသေတ္တထဲကိုပြောင်းထည့်ပေးပါ။ အနဲဆုံး ၃နာရီလောက် chill လုပ်ပြီးမှစားပါ။
This is my very first bake cheese cake. I was quite reluctant to make the cheese cake as it contains lots of cheese and cream (however very delicious though) which I don’t want to consume that much. That’s why I didn’t bake any cheese cake after doing no-bake cheese cake at BITC. It was about 3-4 months back then.
A couple of week ago, one of my colleagues (who tasted no-bake cheese before) ordered the cheese cake for his family.. I was surprised with his order, however I have to push back as I have no confidence with my baking skill yet. I told him that I will try it out first and will let him know when I am ready.
That was how I ended up with baking cheese cake during last weekend. I used Anuty Yochana cheese cake recipe (but I halve it) and found the taste is much better compare to my 1st one. It is cheesier as well as sourer (justalittle bit). I like it very much, however my hubby finds it too cheesy and he prefers the first one. Hmmm…preference differences…But I knew my colleague prefer cheesier taste and this would be ok for him.
175 gm. Digestive biscuits - blend into powder form
60 gm. melted butter
Mix the blended biscuits with melted butter and press intoa8"tin witharemovable base and chill in the refrigerator till set.
Cream cream cheese with sugar until creamy.
Add in melted white chocolate and mix till well blended.
Add in eggs one atatime and cream till well mixed.
Add in sour cream, lemon juice and lemon zest.
Pour in whip cream and mix till well blended.
Lay fresh blueberries into the chilled biscuit base.
Pour batter into the chilled biscuit base and bake in water bath at 160C for about 70 mins. or until set.
Remove cake from oven and let it cool down before refrigerating for at least3hours.
Release cake from tin and decorate with grated white chocolate curls.
Posted by Evy at 4:31 PM
စံချိန်မှီပဲ ညီမရေ... လှလဲလှ ကောင်းမယ်ဆိုတာလဲသိတယ်...;)
အစ်မ Evy ရေ...
ပမာဏရေးထားတာလေးတွေ ချီစ်ကိတ်လေး လုပ်ကြည့်မို့ အခက်အခဲ တွေ့နေပါတယ်။ အိမ်မှာ ဂရမ်ချိန်တဲ့စက်လေး မရှိဘူး။ dl နဲ့ တိုင်းနေကြဆိုတော့။ ဥပမာ 75 g whipped cream ဆိုရင် ဘယ်လောက် dl ရှိလဲ အင်တာနက်မှာ ပြောင်းတဲ့ပာာတွေ လိုက်ရှာတာလည်း အဆင်မပြေဘူး အစ်မရေ...။ တတ်နိုင်ရင် ဒီစီလီတာလေးနဲ့ ပါ ရေးပေးပါလားပာင်။
I tried to make this cheese cake and I couldn't find sour cream.Could U kindly tell me where to buy sour cream in singapore?
Hi Nandar, sour cream is available in NTUC. Usually, it can be found together with other dairy products such as cheese, yogurt etc..